अमेरिकामा नेपाली कलाकार ऋचा, रिमा र गर्भवती निशाको यस्तो पोज ! (फोटो फिचर) - pnpkhabar.com
You are at:Home»चलचित्र»अमेरिकामा नेपाली कलाकार ऋचा, रिमा र गर्भवती निशाको यस्तो पोज ! (फोटो फिचर)
अमेरिकामा नेपाली कलाकार ऋचा, रिमा र गर्भवती निशाको यस्तो पोज ! (फोटो फिचर)
By रिता घिसिंग on १४ माघ २०७४, आईतवार ०८:५५ चलचित्र, फोटो फिचर
काठमाडौँ : नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरु केहि समय अगाडी अमेरिकाको मोह धेरै नै थियो । अहिले धेरै कलाकारहरु अमेरिका बस्दै आएका छन् । चलचित्र क्षेत्रमा जम्दै गरेका नायक र नायिकाहरु पनि अमेरिका पुगेपछि त्यतै बस्दै आएका छन् । दर्जन बढी कलाकार त्यहाँ लामो समयदेखि बस्दै आइरहेका छन् । कार्यक्रम र घुम्न जाने कलाकारको संख्या पनि कम छैन ।
गर्भवती भएपछि नायिका निशा अधिकारी अमेरिका पुगिन् । नायिका रिमा विश्वकर्मा पनि कार्यक्रमको सिलसिलामा भर्खरै अमेरिका पुगेकी छिन् । बाल्टीमोरमा बस्दै आएकी अभिनेत्री ऋचा घिमिरेसँग गर्भवती निशा र एकल भएकी रिमाले भेट गरे । भेटपछि उनीहरुले बाल्टिमोरमा निकै रमाईलो गरेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्बिरबाट बुझ्न सकिन्छ ।